आईपीएल मिनी अक्सन : नेपालबाट सन्दिपलाई मात्र बोलि लाग्ने, बेस प्राईस ४० लाख भारु | KhelNepal
नेपालबाट अक्सनको लागि सन्दिप लामिछाने सहित बिनोद भण्डारी, करन केसी, सोमपाल कामि, कुशल मल्ल, शरद भेसावकर, अविनाश बोहरा र दिपेन्द्र ऐरीले अक्सनमा नाम दर्ता गराएका थिए। नेपाल क्रिकेट संघमार्फत खेलाडीहरु दर्ता भएका थिए। पहिलो पटक सन्दिप बाहेक अन्य खेलाडीहरु आईपीएल अक्सनमा दर्ता भएता पनि सन्दिप बाहेक अन्य खेलाडीमा टिमहरुले चासो नदेखाएका हुन्।
आईपीएलको मिनी अक्सन फेब्रुअरी १८ तारिखमा आयोजना हुनेछ
सन्दिपले यो पटक आफ्नो बेस प्राइस ४० लाख भारतीय रुपैयाँ ( ६४ लाख नेपाली रु. ) राखेका छन्। २०१८ मा सन्दिपलाई दिल्लीले प्रति सिजन २० लाख भा.रु. दिने गरि अक्सनमार्फत टिममा भित्र्याएको थियो। सन्दिप २०१८ मा बिक्रि हुँदा बेस प्राइस २० लाख भारु रहेको थियो जसमा दिल्लीले उनलाई भित्र्याएको थियो। यो सिजन सन्दिपलाई टिमहरुले ४० लाख भारुबाट बोलि लगाउन सुरु गर्नेछन्। दिल्लीसंग ३ वर्षे अनुबन्ध अवधि समाप्त भए पछि यो सिजन दिल्लीले नेपाली स्पिनरलाई फुकुवा गरेको थियो।
सन्दिप एसोसिएट राष्ट्रबाट यो सिजन आईपीएल अक्सनमा स्थान बनाउने मात्र तेश्रो क्रिकेटर हुन्। अमेरिकाका अलि खान युएईका कार्तिक मैयेप्पा अन्य २ क्रिकेटर हुन्।
दक्षिण अफ्रिकालाई ३ रनले हराउदै पाकिस्तानद्वारा शृंखलामा अग्रता